Magaalooyinka Talyaaniga, safar lagu dhex marayo salka Renaissance | Wararka Safarka
Luis Martinez | | Getaways Yurub, Guides, safarka
Fagaaraha Navona ee Rome
Magaalooyinka Talyaanigu waxay isu keenaan wax kasta oo socotadu rajeyn karto. Geediga ilbaxnimada reer galbeedka oo ay weheliso Giriigga iyo abuuraha aasaaska Laatiinka ee dhaliyay luqadaha jacaylka, Talyaanigu sidoo kale wuxuu ahaa aasaasihii Renacimiento iyo dalka hooyo ee garaadka ugu weyn aadanaha.
Xaqiiqdii, magaalooyinkeeda waxay leeyihiin taallo iyo yaabab badan, haddii aad isku daydo inaad aragto dhammaantood, waxaad halis ugu jirtaa inaad ka cabato Stendhal syndrome, magac loo bixiyo gobolka gaarka ah ee socdaalku galo ka dib markii uu arkay tiro intaa leeg oo farshaxanno ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad nala soo booqato magaalooyinka ugu quruxda badan Talyaaniga, annagoo ka bilaabeyna caasimadiisa.
0.1 Rome, weligeed ka mid ah magaalooyinka Talyaaniga
0.2 Vatican City, yaab Masiixiyada
0.3 Milan, oo ah caasimad dhaqaale oo taalooyin buuxa ka buuxa
0.4 Venice, magaalada kanaallada
0.5 Florence, caasimada Tuscany
1 Gastronomy ee Italia
Rome, weligeed ka mid ah magaalooyinka Talyaaniga
Sharax wax kasta oo aad ka arki karto Roma sadarro dhowr ah ayay la mid tahay in lagu daro Don Quixote oo dhan buugga xusuusta dugsiga. Laga bilaabo Latinkiisii ​​hore, waxaad leedahay Coliseum, oo uu dhisay Emperor Vespasian isla markaana lahaa qol loogu talagalay 50 oo qof. Ama Madasha Roman, oo ahayd xarunta neerfaha ee caasimada Boqortooyadii halkaas oo aad ka heli doontaan taalooyin ay ka mid yihiin taariikhihii Titus iyo Severus the Seventh, macbudka Antoninus iyo Faustina ama Curia, halkaas oo mudanayaashu ku kulmeen.
Meelaha magaalooyinka ee cajiibka ah ayaa ah Fagaaraha Navona leh ilo badan. Iyo, haddii aan ka hadalno kuwan, si dabiici ah, waxaa jira Trevi Fountain, mid ka mid ah astaamaha Rome. Qaabka ay hadda u shaqeyso wuxuu ka bilaabmay qarnigii XNUMX-aad. Ma iloobi kartid midkoodna Jilicsan, xaafadaha dariiqyada xayiran iyo dukaamo badan iyo maqaaxiyo caadi ah.
Sida daaraha waaweyn ee Rome, waa booqasho lama huraan ah Villa Borghese, oo ay ku yaalliin mid ka mid ah matxafyada ugu muhiimsan ee farshaxanka adduunka; ah Palazzo Maximo, halkaas oo aad ka arki karto waxyaabaha ugu wanaagsan ee la ilaaliyo ee Roman; ah Qasriga Altemps, oo ay ka buuxaan farshaxanno Giriig iyo Roomaan ah; ah Qasriga Venice, sidoo kale waxaa ka buuxa farshaxan, ama Qasriga Barberini, Dhisme cajiib ah qaabka baroque.
Ugu dambeyntiina, waxaan ka hadli doonnaa kiniisadaha, oo aan ka bilaabi doonno kan Basilica ee St. John Lateran, oo la dhisay qarnigii afraad iyada oo la amrayo Constantine the Great oo ahaa kii ugu horreeyay ee Katooliga ee Rome. Oo ay sii wadaan kuwa San Pablo Extramuros, Santa María la Mayor ama San Clemente. Laakiin Rome sidoo kale waxay leedahay dowlad madaxbanaan oo ku dhex jirta oo ku siinaysa adiga yaabab badan sida Magaalada Aakhiro ama xitaa in ka badan: Vatican-ka.
Vatican City, yaab Masiixiyada
Iyada oo leh cabirkeeda cajiibka ah, fagaaraha st peter waa xarunta neerfaha ee gobolka yar ee Katooliga. Waxaa si guud u naqshadeeyay Bernini, qaybteeda dhexe waxay ku taagan tahay, iyada oo ay ku dhejinayaan tiirar ay ku xardhan yihiin taalooyinka quduusiintu.
Dhinacyadeeda mid ka mid ah ayaa ah Basilica St. Peter ee, caqliga sida Bramante, Miguel Ángel iyo Maderno awgood. Waa macbud cajiib ah oo qubbadku ka dhex muuqdo, oo dhererkiisu yahay 136 mitir. Laakiin xitaa ka sii yaab badan ayaa ah Sistine Chapel, taas oo ku jirta Qasriga Rasuullada oo sawiradooda ay sabab u yihiin caqliga sida Michelangelo laftiisa, Botticelli, Ghirlandaio ama Perugino.
Si aad u dhammaystirto booqashadaada Vatican-ka, waxaad arki kartaa qaar ka mid ah matxafyadeeda, kuwaas oo ka qiimo badan. Kuwaas waxaa ka mid ah, Pinacoteca, Matxafka Masaarida, Ergeyga Qowmiyadeed, Galleyda Candelabra ama Matxafka Etruscan. Shaki la'aan, Vaticanku waa booqasho lama huraan ah oo ka dhex jirta magaalooyinka Talyaaniga.
Milan, oo ah caasimad dhaqaale oo taalooyin buuxa ka buuxa
Hadda waxaan kuu kaxeyneynaa woqooyi si aad u booqato Milan, waa yaab kale oo badan oo Talyaanigu ku siiyo. Waxaa aasaasay Celts oo la wacay Mediolanum Latinos, waxay muujineysaa Duomo ama Cathedral, oo ah Gothic masterpiece ah oo wajigiisa la dhammeeyey qarnigii XNUMXaad iyada oo lagu amrayo Napoleon Bonaparte.
Qeyb ahaan, Qasriga Sforzesco Way ku gaar tahay adduunka soo bandhigiddeeda wajiga dibedda iyo Taarikhdeeda Clock. Laakiin sidoo kale tirada badan ee matxafyada ayay ku yaalliin. Waxaa ka mid ah, sawir gacmeed aan caadi ahayn iyo Matxafka Farshaxanka Qadiimiga ah, oo leh dahab sida 'Trivulzian Codex' oo uu qoray Leonardo da Vinci.
Ugu dambeyntiina, madashii taallooyinkii waaweynaa ee magaalada lagu dhammaystiray ayaa ah Gawaarida Vittorio Emanuele II, oo leh qasnado waaweyn oo quraarado ah iyo makhaayado casri ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad waqti haysato, Milan wax badan ayaa kuu soo bandhigi kara. Tusaale ahaan, isaga Tiyaatarka La Scala, ka Basilica ee Saint Ambrose ama Beerta Sempione.
Gawaarida Vittorio Emanuele II
Venice, magaalada kanaallada
Dhinaca bari ee kii hore, waxaad ku leedahay magaalo kale oo ka mid ah magaalooyinka quruxda badan ee Talyaaniga: Dalxiis, caasimada Veneto. Aad caan baa u ah iyada Fagaaraha St. Mark, oo uu gudoomiye ka yahay Basilica isku magac ah, oo ah mucjiso dhismeedka Byzantine ee gobolka iyo iyada campanile laga dhaafay
Adigoon ka tagin fagaaraha, waxaad leedahay Qasriga Ducal, Ku soo rogaya tusaale Venetian Gothic, in kasta oo aan qurux ka yarayn ay tahay barxadda Renaissance. Taas waxaa weheliya, daarihii kale ee quruxda badnaa ee magaalada waa Ca d'Or, Palazzo Dolfin Manin ama Contarini del Bovolo, Oo caan ku ah haysashada jaranjarada xiisaha leh ee banaanka.
Sidoo kale, kama bixi kartid Venice adoon isku dayin caankeeda gondolas. Ku soo wareejinta kanaallada dul saaran waa khibrad cajiib ah, in kasta oo aan rakhiis ahayn.
Florence, caasimada Tuscany
Caasimada gobolka quruxda badan ee Tuscany, Florence runti waa cajaa'ib. Xarunteeda taariikhiga ahi waa Dhaxalka aduunka ilaa 1982 oo waxaa ka buuxa dhismayaashii dhexe iyo kuwii cusubaa. Ku Kaniisadda Santa Maria del Fiore, oo leh jihada marmar iyo quruxdeeda weyn, shaqada Brunelleschi.
Waa inaad sidoo kale aragtaa Qasrigii Hore, ee caanka ah Fagaaraha Signoria. Waxaa la dhisay bilawgii qarnigii XNUMXaad waxayna dib u xasuusataa qalcaddii qarniyadii dhexe. Aad ugu dhow tan ayaa ah tan caanka ah Buundada Hore, mid ka mid ah kuwa badan oo ay leedahay Florence. Waxaa sidoo kale la dhisay qarnigii XNUMXaad waana wax la yaab leh maxaa yeelay waxaa ku yaal guryo la degan yahay.
Ugu dambeyntii, kama bixi kartid magaalada Tuscan adigoon soo booqan Gawaarida Uffizi, oo ku taal qasri uu naqshadeeyay Giorgio Vasari oo ay ku yaalliin mid ka mid ah uruurinta farshaxanka adduunka ugu caansan. Iyo, haddii aan kaala hadalno matxafyada, waxaa sidoo kale aad loogu talinayaa inaad aragto Gallery ee Akadeemiyada Florence, aaway David by Miguel Ángel.
Kaniisada Santa Maria del Fiore (Florence)
Dalka transalpine wuxuu leeyahay mid ka mid ah cunnooyinka ugu qanisan adduunka. Dhammaan magaalooyinka ku yaal Talyaaniga waxay leeyihiin suxuun caadi ah oo ay ku siiso, ka baxsan baastada iyo pisa. Magaalada Rome waxaa ku yaal suxuun caan ah sida coda waxaa jira vacinara, Digaag la kariyey oo leh khudaar, ama carciofi alla giudia, qaar ka mid ah artichokes la shiilay.
Xitaa dhadhanka waa cunnada Milanese. Tan waxaa ku jira polenta, hadhuudh la shiiday oo leh xawaash ama sausages; ah ossobuco, Hilib la kariyey oo badanaa la socda a risotto, ama cotoletta alla milanesa, Jeex jeex jeex jeex ah. Sidoo kale waa inaad isku daydaa macmacaanka sida kuwa caanka ah tiramisu ama curric brulee.
Dhinaceeda, Venice waad weydiin kartaa cuntada badda lagu garaaco, oo leh sardines, squid, prawn iyo scallops oo fuulay lana shiilay; Beerka hilibka veetia, lagu shiilay basasha iyo subagga oo lagu adeegsaday polenta, ama bariis leh hilib doofaar.
Ugu dambeyntiina, magaalada Florence ee saxan, Hilib lo'aad oo macaan; ah lampredotto, Safar xitaa loo adeego sida rooti; ah papa al pomodoro, maraq leh yaanyo, toon, saliid saytuun ah, basil iyo rooti duugoobay, ama bistecca alla fiorentina, ribeye hilib duban oo la dubay.
Gabagabadii, magaalooyinkan oo dhan ee Talyaaniga kuula yaabi doonaan. Waxay u badan tahay inay yihiin kuwa kugula taliyay inaad booqato. Laakiin, haddii aad waqti hesho, waxaad u safri kartaa kuwo kale oo badan. Tusaale ahaan, si Verona, dhammaantood waxaa loo tixgeliyey Goobta Dhaxalka Adduunka; ku Pisa, oo leh munaaraddeeda foorarsan ee caanka ah; ku Turin, gogosha mideynta Talyaaniga, ama Naples, oo u dhow kuwaas oo ah burburka Pompeii iyo Herculaneum. Iyadoo aan la iloobin Padua, Modena, Mantua, Bergamo ama kuwa kale ee aadka loo yaqaan sida Bolzano, Ferrara ama Ravenna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » safarka » Magaalooyinka Talyaaniga
Maxaa lagu arkaa Palencia?
Waxa lagu arko Archena, Murcia